Wararka - Suuqa korantada korontada ee DIN Rail 2021 baahida sii kordheysa
Soo Saarid Kale
DC Power Supply hagaajin karo
Soosaaris Koronto badan
Taxanaha Soo-saarista Laba-geesood ah
Taxanaha Soosaarka Bawdada
Taxanaha Soo-saarista Triple
Adabtarada hagaajin karo
Adaptop Power Desktop
Adapters Power Mounted
Bixinta Awood Biyo La'aanta
Siinta Awoodda Joogtada ah
Koronto Joogto Joogto ah
Suuqa korontada DIN Rail 2021 kordhaya baahida
Bixinta korontada tareenka ee DIN waxay ku saleysan tahay heerar taxane ah oo ay abuureen Deutsches Institut fur Normung (DIN), oo ah urur heer qaran oo ka jira Jarmalka. Sahaydan korontada waxay u beddelayaan hadda (AC) si ay toos ugu beddelaan kuwa hadda jira (DC) ee kala duwan. Isticmaalaha ugu dambeeya wuxuu heli karaa awoodda wax soo saarka DC ee loo baahan yahay isagoo adeegsanaya goobaha kala duwan ee laga heli karo korontada. Unugyadan korontada siiya ayaa sahlan in la rakibo waxayna u baahan yihiin dayactir ka yar ama aan lahayn.
Iyada oo kor ku xusan faa'iidooyinka sahayda korontada ee tareenka DIN, wakhtiga dhimista waxaa lagu hayaa heer ugu hooseeya iyada oo aan wax u dhimayn wax -ku -oolnimada ama wax -soo -saarka warshadda. Sahayda korontada ee tareenka ee DIN waxaa inta badan loo adeegsadaa otomaatiga warshadaynta iyo xakamaynta, warshadaha fudud, qalabaynta, xakamaynta habka iwm.
Waqtigan xaadirka ah, Yurub waxay ahayd suuqa ugu weyn ee korontada tareenka DIN, oo leh qiyaastii 31% saamiga mugga dalabka guud ee adduunka iyo qiyaastii 40% saamiga dakhliga. Jarmalka ayaa ah suuqa ugu weyn ee korontada DIN ee Yurub.
Sahayda korontada ee tareenka DIN waxaa inta badan loo adeegsadaa IT, warshadaha, tamarta la cusboonaysiin karo, saliidda & gaaska, semiconductor, caafimaadka. Saamiga suuqa dalabka ee warshadaha ayaa ka badan 60%.
Qaybaha korontada ee tareenka ee DIN aad bay u fududahay in la isticmaalo waxaana ka sii muhiimsan si sahlan in la beddelo marka dhibaato dhacdo. Sidaa darteed hoos u dhaca wax -soo -saarka ayaa si weyn hoos loogu dhigay. In kasta oo ay jiraan dhibaatooyin tartan, sababta oo ah wacyiga isticmaale-yaasha iyo dalabkooda alaabada dhamaadka sare ah, maalgashadayaashu wali waxay ku rajo weyn yihiin aaggan, mustaqbalku wali wuxuu yeelan doonaa maalgelin cusub oo cusub oo soo gasha garoonka. Shanta sano ee soo socota, mugga isticmaalka ayaa sii kordhaya, iyo sidoo kale qiimaha isticmaalka.
Falanqaynta Suuqa iyo Fahanka: Suuqa Deynta Tareenka Caalamiga ah ee DIN Suuqgeynta DIN Tareenka Korontada adduunka waxaa lagu qiimeeyaa 775.5 milyan US $ 2020 waxaa la filayaa inuu gaaro 969.2 milyan US $ dhammaadka 2026, isagoo ku koraya CAGR oo ah 3.2% inta lagu jiro 2021 -2026.
Si loo helo faham dhammaystiran oo ku saabsan dhaq-dhaqaaqa suuqa, suuqa DIN Rail Power Supply Market waxaa lagu falanqeeyaa juqraafiyo muhiim ah oo kala ah: Mareykanka, Shiinaha, Yurub, Japan, Koonfur-bari Aasiya, Hindiya iyo kuwa kale. Mid kasta oo ka mid ah gobolladan waxaa lagu lafaguraa iyada oo ku saleysan natiijooyinka suuqa ee dhammaan waddamada waaweyn ee gobolladaas si loo fahmo heerka macro ee suuqa.
Waqtiga dhejinta: May-11-2021
E Dhismaha, Songyuan Technopolis, Beesha Zhangge, Fucheng Street, Degmada Longhua, Shenzhen, Guangdong, Shiinaha
FARIIN U DIR
Hoggaamiyaha Strip Light Transformer, Bixinta Awoodda Barnaamijka, Led Strip Light Power Supply, Kala-beddelka Quwada Korontada, Korontada Sahayda Awoodda, Awood siinta korantada,